Etu esi agafe ederede aka na komputa na Google Lens | Akụkọ akụrụngwa
Anyị amatala akụkụ Google, n'echiche ọ bụla. Nnukwu teknụzụ zuru ụwa ọnụ nke amụrụ site na nyocha ọchụchọ. Na na "n'agbanyeghị" ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ kachasị ike n'ụwa, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ihe mere ka ọ dị ukwuu. Google emelitere ngwa mkpanaka nke injin nyocha ya na-agbakwunye ojiji nke Google Lens nwere njirimara ọhụrụ n'ezie na-akpali.
Ugbu a Google Lens nwere ike ịmata aka aka gị ma nye anyị enwere ike ịnyefe ya na kọmputa. Enweghịzị ị gafere ihe edeturu na mpempe akwụkwọ dị ọcha ... abụghị nke ahụ ịtụnanya? Google Lens nwere algorithm dị elu nke nwere ike ịkọwapụta ederede ederede, ma ọ dịkarịa ala, ị ga-enwerịrị ederede aka ederede. Ọ bụrụ n’inwe ederede ederede dị mma ma chọọ ịma etu esi ebufe ederede ederede aka na kọmputa gị, anyị ga-akọwara gị ya n’okpuru.
1 Google Lens, ederede gị site na aka site na akwụkwọ gaa na kọmputa
1.1 Gaa na ederede ederede na kọmputa site na iji Google Lens
Google Lens, ederede gị site na aka site na akwụkwọ gaa na kọmputa
Ọ bụrụ na ngwá ọrụ a adịworị n'oge ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ mahadum, agara m echekwa ọtụtụ awa na nhicha na akwụkwọ. N'ezie, Google Lens ghọrọ ezigbo enyi maka ụmụ akwụkwọ. Enwekwu enyemaka, na n'efu, nke ga-enye anyị oge ka dị. Ike nyefe ihe ndetu gị, ndetu ma ọ bụ ihe omume mmechi na kọmputa adịtụbeghị mfe na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otu esi eji ngwa oru ohuru a, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ melite ngwa ọchụchọ Google ebe ọ bụ na nke a bụ ihe na-adịbeghị anya atụmatụ. Google Lens pụtara na ngwa njin ọchụchọ dị ka otu nhọrọ ọzọ iji rụọ ọchụchọ. Ọzọkwa ọ dị mkpa na kọmputa anyị ga-eji nwere arụnyere Google Chrome. Ebe anyị nwere ha abụọ, anyị nwere ike rụọ ọrụ ahụ n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Gaa na ederede ederede na kọmputa site na iji Google Lens
Ihe mbụ bụ na anyị ga-abanye na kọmputa anyị, site na Google Chrome, nwere otu akaụntụ njirimara anyị ji ngwa ahụ na ekwentị. N'ihi ya anyị nwere ike ịnyefe ederede anyị ga-ejide na igwefoto igwefoto gaa na desktọọpụ nke kọmputa anyị. Ya mere, anyị nwere ike mado ederede ebe anyị chọrọ ya.
Mepee Google oghere, anyị na-elekwasị anya na ederede anyị chọrọ idetuo anyị kwesịkwara enweta na «ederede» na akara ngosi maka ngwa ị tụfuo onyonyo, ọ bụrụ na enwere otu akwụkwọ ahụ.
Al lelee ederede ederede, algorithm na-ewepu ihe oyiyi nwere ike ịbụ na dọkụmentị. Site na ịpị «ederede», Ngwa ahụ na-egosi anyị ederede achọtara na igwefoto. N'oge a, na ịpị na ihuenyo, anyị nwere ike ịhọrọ aka ederede niile na-egosi, ma ọ bụ naanị akụkụ na-amasị anyị. Mgbe anyi mere nhoputa ederede anyi choro i copyomi kpam kpam, anyi aghaghi ime pịa «họrọ niile». Na-eme nke a anyị nwere akwụkwọ ederede depụtaghachi na kọlụm Google Lens. Ugbu a, ọ ga-adị mkpa «izipu» nhọrọ nke ederede na kọmputa anyị ...
Mgbe anyị nwere ederede anyị ahọpụtara wee pịa i toomi ya, ngwa na-egosi anyị nhọrọ ọhụrụ. Iji nyefee nhọrọ ederede emere na kọmputa anyị, anyị ga-pịa "Detuo na kọmputa". N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike nwee otu tebụl aka anyị dee ederede nakwa na anyị ahọrọla.
Site na ịpị «detuo na kọmputa» anyị na-nyeere ndepụta nke akụrụngwa dị. Maka nke a ọ bụ dị mkpa na mbu, dika anyi gosiri, anyi nwere banye na Google Chrome nwere otu akaụntụ ahụ anyị ji Google Lens na smartphone. Ọ bụrụ na anyị mere ya otu a kọmputa anyị ga-apụta n'etiti nke anyị nwere ike ịhọrọ.
Ozugbo emere nke a, ozi ga-egosi na ihuenyo na-egosi na ihe ederede anyi hoputara na komputa anyi. Iji nwee ike ịnweta ederede nke anyị chọtara na igwefoto smartphone, anyị ga-eme iwu «mado» ahụ.
Anyị nwere ike "Tapawa" n'ime ihe nchọgharị ahụ, ma ọ bụ ozugbo banye mmemme mmezi ederede anyị. Anyị enwetala ederede eji aka dee na desktọpụ anyị. Mfe na ngwa ngwa agaghị ekwe omume!
Chọpụta na ị gaghị eche n'echiche na ịnyefe ederede aka aka na kọmputa anyị ga-adị mfe. Dị ka anyị kwuru na mbido Google Lens ga-abụ nnukwu enyemaka maka ụmụ akwụkwọ. Ike ịzọpụta oge dee na kọmputa bụ mgbe nnukwu enyemaka. Dị ka anyị hụworo naanị ihe ị ga - eme bụ ịnwe ngwaọrụ Google.
Ọrụ ị pụrụ ịrụ na ama ọ bụla na-enweghị mkpa nkọwa dị oke elu. Y nwere kọmputa ọ bụla nke ị tinyegoro ihe nchọgharị Google Chrome. Otu ihe atụ ọzọ nke otu Google si eme ka ndụ dịrị anyị mfe. Na nke a yana ngwa ọrụ n'efu, na-enweghị mgbasa ozi na oke mma. Unu anwalebeghị ha? Already maraworị otu esi eme ya.
Lelee otu esi etinye foto panoramic na enweghị nkebi na Instagram
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi eji aka Google Lens nyefee ederede aka gi na komputa gi
Ndewo. Ọ ga-amasị m ka ị kwuo okwu gbasara akụkụ nchekwa ahụ. Google ana emeso ihe anyi dere? A na m atụ ụjọ na ọ dịka nchọpụta olu (dịka ọmụmaatụ, Samsung's Svoice, ebe ị ga-enye ha ikike ịchekwa olu gị, ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ya).
Anyị amaworị na Google OCRs ihe oyiyi ị tinyere na ozi ịntanetị gị Gmail. Kedu ihe na-egbochi ha ịnweta aka aka gị?